Izindaba - I-OMRON esohlwini lwe-Dow Jones Sustainability World Index
I-OMRON Corporation ifakwe ohlwini lonyaka wesi-5 olandelanayo ku-Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), okuyinkomba yentengo yesitoko ye-SRI (esiyisibopho somphakathi).
I-DJSI inkomba yentengo yesitoko ehlanganiswe yi-S&P Dow Jones Indices.Isetshenziselwa ukuhlola ukusimama kwezinkampani ezinkulu zomhlaba ngokombono wezomnotho, ezemvelo, kanye nezenhlalo.
Ezinkampanini ezivelele emhlabeni wonke ezingu-3,455 ezahlolwa ngo-2021, izinkampani ezingama-322 zikhethelwe i-DJSI World Index.U-OMRON uphinde wafakwa ohlwini lwe-Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index (DJSI Asia Pacific) ngonyaka we-12 olandelanayo.
Kulokhu, i-OMRON ilinganiselwe phezulu kakhulu kuyo yonke ibhodi mayelana nemibandela yezemvelo, ezomnotho, nezenhlalo.Esigabeni Sezemvelo, i-OMRON ithuthukisa imizamo yayo yokuhlaziya ubungozi namathuba ukuguquka kwesimo sezulu okungaba nawo ebhizinisini layo futhi idalule ulwazi olufanele ngokuhambisana ne-Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) Guidance eye yasekela kusukela ngoFebhuwari. 2019, kuyilapho ngesikhathi esifanayo inesethi ehlukahlukene yedatha yayo yezemvelo eqinisekiswa abantu besithathu abazimele.Esigabeni Sezomnotho Nezenhlalakahle, futhi, i-OMRON iqhubekela phambili nokudalula izinhlelo zayo zokuqhubeka nokuthuthukisa ukubonakala kwayo.
Ukuqhubekela phambili, ngenkathi iqhubeka nokucabangela izici zezomnotho, ezemvelo, nezenhlalo kuyo yonke imisebenzi yayo, i-OMRON izohlose ukuxhumanisa amathuba ayo ebhizinisi kukho kokubili ukuzuzwa komphakathi osimeme kanye nokuthuthukiswa kwamagugu ezinkampani esimeme.
Isikhathi sokuthumela: Dec-08-2021
IServo Motor IMitsubushi HMI Delta HMI IAc Servo Drive 1kw Servo Motor ILogic Controller Plc